LR41: mianatra bebe kokoa momba ireo sela na bateria | Fitaovana maimaim-poana
LR41: mianatra bebe kokoa momba ireo batery ireo
Isaac | 05/10/2021 08:39 | Fitaovana elektronika
Ao an-tsena dia misy be dia be ny bateria amin'ny voltages samy hafa, fahaiza-manao, ary koa amin'ny endrika maro. Ny tsirairay dia mitodika amin'ny karazana fitaovana manokana. Efa namakafaka ny iray tamin’izy ireny izahay taloha, toy ny misy azy ny CR2032. Amin'ity lahatsoratra ity dia hofakafakaintsika ny "rahavavy" iray toy izany ny LR41, izay an'ny an'ny batterie antsoina hoe batterie ihany koa.
Ny mampiavaka azy dia mahatonga azy io ho mendrika amin'ny karazana sasany fampiharana izay misy ny habe sy ny faharetan'ny fotoana ary miaraka amin'ny fitakiana herinaratra tsy avo toy ny an'ny fitaovana lehibe hafa ...
1 Inona ny bateria LR41?
1.1 Aiza no hividianana bateria LR41
2 Misimisy kokoa momba ny batery
2.1 Karazana bateria
2.1.1 Tsy azo averina
Inona ny bateria LR41?
La bateria na bateria LR41 dia karazana bateria ao amin'ny bokotra fianakaviana. Heverina ho alkaline sy tsy azo averina indray koa izy io. Ny voltany dia 1.5 volts, miaraka amin'ny habe kely ho an'ny fitaovana elektronika izay mila fangatahana angovo ambany, toy ny famataranandro, tondro laser, calculatera ary fitaovana elektronika hafa.
Momba ny firafitry ny sela, dia mampiasa karazan-bateria io zavatra simika samihafa noho ny fahafinaretana. Miaraka amin'ny casing metaly ivelany izay ny tsato-kazo tsara dia ny faritra fisaka izay misy matetika ireo soratra, miaraka amin'ny tarehy mifanohitra aminy no andry ratsy. Raha ny faharetana dia mety hahatratra 3 taona amin'ny fitehirizana izy ireo.
Aiza no hividianana bateria LR41
Azonao atao ny mahita ireo karazana bateria ireo any amin'ny magazay manokana, na dia tsy mora hita toy ny karazana A izay malaza kokoa aza izy ireo. Na izany aza, amin'ny sehatra toa an'i Amazon dia azonao atao mividy isaky ny singa na ao anaty fonosana:
Fonosana Maxell an'ny bateria 10 karazana LR41
Kitapo Camelion misy singa 2 LR41
Duracell 376/377 LR41 unit
Misimisy kokoa momba ny batery
Tsy maintsy manavaka ny batterie sy ny bateria, na dia matetika aza ireo teny roa ireo dia ampiasaina tsy misy dikany (ny antony dia ny teny hoe bateria amin'ny teny anglisy, izay manjavozavo ary mety ho an'ny roa tonta), raha te ho hentitra kokoa ianao dia azonao atao izao manaraka izao:
bateria: ny bateria dia afaka mamerina ny asany raha misy onja elektrika omena azy, izany hoe tsy misy bateria tsy azo averina. Ho fanampin'izany dia miaritra fandosiran-tena izy ireo mandritra ny andro na volana maro rehefa tsy ampiasaina izy ireo.
pila: mandalo dingana tsy azo ivalozana izy io, ary rehefa alaina izy ireo dia tsy azo alefa indray. Fa kosa, azo tehirizina mandritra ny taona maro izy ireo nefa tsy misy fandosiran-tena.
Azo zaraina ny stack fianakaviana roa lehibe, ary ao anatin'izy ireo dia afaka manohy manao katalaogy ihany koa izy ireo arakaraka ny karazany sy ny toetrany:
ny bateria tsy azo averina tsy tokony hiezahana enta-mavesatra izy ireo, satria mety simba izy ireo, tsy natao ho an'izay. Natao hampiasaina tokana ihany izy ireo. Ao anatin'ity vondrona ity dia:
Cylindrical: izy ireo no be mpitia indrindra, ary ireo mety hitanao amin'ny famantaranandro, rindrina fanaraha-maso, sns. Anisan'izany ireto:
alkaline: dia fahita ankehitriny. Izy ireo dia voaforon'ny zinc toy ny anode ary dioxide manganese toy ny cathode. Ity karazan'aratra ity dia mateza tokoa, ary tokony hotehirizina manodidina ny 25ºC na latsaky ny fiarovana azy ireo. Araka ny refy, misy ny AA (LR6), AAA (LR03), AAAA (LR61), C (LR14), D (LR20), N (LR1) ary A23 (8LR932), izay samy 1.5 volts ary samy hafa ny habeny , afa-tsy ny farany izay 12V.
Salinas: Ireo batterie ireo dia misy karibonitra zinc, ary miha tsy ampiasaina intsony noho ny fahaizany ambany sy ny faharetany raha oharina amin'ireo alkaly. Hahita ireo karazany mitovy ihany koa ianao, toy ny AA, AAA, AAAA, sns, saingy samy hafa ny kaody IEC sy ANSI.
Lithium: Ampiarahan'izy ireo amin'ny lamin'izy ireo ny lithium, ary mety misy karazany maro miaraka amin'ny fandosiran-tena tena ambany, 1% fotsiny isan-taona. Ho fanampin'izay, manana sehatr'asa maro be izy ireo, manomboka amin'ny -30ºC ka hatramin'ny 70ºC. Ao anatiny dia ahitanao disulfide vy sy lithium, toy ny 1.5v AA na AAA, 3.6v lithium-thionyl colouro, 3v lithium manganese dioxide ...
mahitsizoro: Araka ny lazain'ny anarany, dia bateria miendrika efa-joro izy ireo, samy hafa amin'ny an'ny varingarina. Taloha dia malaza kokoa izy ireo, na dia tsy dia ampiasaina firy aza izy ireo ankehitriny noho ny habeny. Amin'ireny, ny voltages ambonin'ny 4.5v dia azo tratrarina.
alkaline: ireo fantatra amin'ny anarana hoe LR dia afaka manomboka amin'ny 4.5v ho an'ny kitapom-batsy na 3LR12, ka hatramin'ny 9v ho an'ny PP3 (6LR61), amin'ny alàlan'ny 6v ho an'ny bateria flashlight (4LR25).
Salinas: Toy ny amin'ireo varingarina, izy ireo koa dia nanjary tsy nampiasaina ary zara raha ampiasaina, ho an'ny fampiharana tena manokana izay mety hananany tombony kely noho ireo alkaly. Mahita lehilahy toa an'i PP6 sy PP9 ianao ...
Lithium: Misy koa bateria lithium toradroa, matetika miaraka amin'ny lithium thionyl chloride na dioxide manganese lithium. Samy an'ny 9v.
Bokotra: ao anatin'ity fizarana ity dia hiditra ny LR41 amin'ity lahatsoratra ity. Batterie izy ireo izay, araky ny anarany dia miendrika bokotra. Ampiasaina amin'ny fitaovana misy fangatahana herinaratra ambany sy habe kely izy ireo, toy ny famataranandro, fitaovam-pandrenesana sns.
alkaline: batterie 1.5v izy ireo, miaraka amina kaody toa ny LR54, LR44, LR43, LR41 ary LR9.
Lithium: misy ihany koa ny sasany manana voltages 3v. Miaraka amin'ny fiainana mahasoa lava sy afaka miasa amin'ny elanelan'ny maripana be dia be. Ireo bateria ireo dia voamarika ho CR ho an'ny lithium manganese dioxide ary BR ho an'ny lithium-polycarbonate monofluoride (misy lithium thionyl chloride koa, na dia somary vitsy aza izy ireo, miaraka amin'ny 3.6v sy mandritra ny androm-piainana izay mety mihoatra ny 10 taona, ho an'ny fampiharana kritika sy kaody TL). Ohatra, ny CR1025, CR1216, CR2032, BR2032, CR3032, sns. Izy rehetra samy hafa refy.
Oksida volafotsy: afaka mahatratra 1.55v izy ireo ary manana fiakaran'ny maripana ambany tena tsara. Mampiavaka azy ireo amin'ny kaody SR, toy ny SR41, SR55, SR69, sns.
Sel-zinc: fahita matetika amin'ny fitaovam-pandrenesana izy ireo noho ny habeny sy ny fametrahana azy mora. Miaraka amin'ny voltase 1.4 volt. Ny kaodiny dia PR, toy ny PR70, PR41 ...
Batterie fakan-tsary: Mitovy amin'ny teo aloha izy ireo, ary misy koa ny lithium, nefa mazàna dia ao anaty fonosana manokana no ampiasaina amin'ireo fitaovana ireo. Izy ireo dia lehibe kokoa amin'ny habe, ary afaka manome voltages amin'ny 3 ka hatramin'ny 6 volts. Miaraka amin'ny kaody CR amin'ity tranga ity. Toy ny CR123A, CR2, 2CR5, CR-V3, sns.
Araka ny anarany, batterie ireo, na dia maro aza no milaza batterie rechargeable (raha ny marina dia mety hanana endrika mitovy sy mitovy amin'ny batterie tsy azo averina). Ireo karazan'aratra bateria ireo dia tsy natao hampiasaina tokana, fa azo ampiasaina hatrany hatrany hatrany, miaraka amin'ireo tsingerin'ny fandefasana enta-mavesatra maro. Ny be mpampiasa indrindra dia:
Aza mampiasa charger NiCd na NiMH ho an'ny bateria lithium, na ny mifamadika amin'izany. Ny marina dia tokony hampiasaina isaky ny tranga.
NiCd: Ireto batterie nickel-cadmium ireto dia nalaza be, ary tsy dia mihena ny fampiasana azy ireo noho ny effets de mémoire. Raha atao teny hafa, mihena ny fahaizany amin'ny fampiasana. Izy ireo dia afaka maharitra 2000 eo ho eo ary misy tsingerina fandefasana, izay isa miavaka tokoa.
NiMH: malaza be izy ireo, ary tsy misy vokany fahatsiarovana betsaka tahaka ny teo aloha. Ho fanampin'izany, manohana ny hakitroky angovo avo kokoa izy ireo, izay tsara ihany koa. Manana ny taha ambony avo lenta sy ny hafainganam-pandeha ambany izy ireo raha oharina amin'ny NiCd. Izy ireo koa dia mora tohina kokoa amin'ny fiovan'ny mari-pana. Maharitra eo anelanelan'ny 500 sy 1200 ny tsingerin'ny fandefasana vola.
Li-Ion: izy ireo no be mpampiasa indrindra ankehitriny noho ny fananany mahafinaritra. Izy ireo dia manohana ny hakitroky ny angovo avo kokoa isaky ny sela noho ny NiCd sy NiMH, amin'izay izy ireo dia azo aorina matanjaka sy maivana. Ny vokatry ny fahatsiarovan'izy ireo dia azo tsinontsinoavina, toy ny tahan'ny fandosiran-tenany, saingy manana teboka malemy izy ireo, satria ny faharetany dia tsy tonga amin'ny tsingerin'ny NiCd. Amin'ity tranga ity dia eo anelanelan'ny 400 sy 1200 ny tsingerin'ny fandefasana vola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » LR41: mianatra bebe kokoa momba ireo batery ireo
Photodetector: inona izany, inona izy io ary ahoana no fiasany
Faharanitan-tsaina sy sakana amin'ny alàlan'ny Horizon Oasis